Password များကို Script or Software မသုံးဘဲ Facebook ပေါ်တွင် ကြည့်ပြခြင်း... ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Password များကို Script or Software မသုံးဘဲ Facebook ပေါ်တွင် ကြည့်ပြခြင်း...
6:21:00 am facebook No comments
မင်္ဂလာပါ.. ကျွန်တော် နောင်ခန့်သူပါ.....
ဒီနေ့ ကတော့ မသိတဲ့ သူတွေ အဖို့လန်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို တင်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..... ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး.....
ဒီနည်းကတော့ သတိမမူ ဂူမမြင် ကြလို့ မသိကြတာဖြစ်ပါတယ်... သိတဲ့သူတွေ တော့ ကျွန်တော်
ဘာမှ မပြောပါဘူး... PRO ကြီးတွေကတော့ ထက်ခနဲ ဆိုတန်းတော့ သိကြတာပေါ့ဗျာ..
ကျွန်တော် အခု ပြသပေးမှာကတော့
အခြေခံ နားလည်ရင် သိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ...Code လေးနည်းနည်းဆွတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်...
Coding Theory လေးကို အသုံးချခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်.....
Web Page တွေ ပေါ်မှာ... Password ကြည့်တဲ့ Software တွေ Script တွေ အလုပ်ရှုပ်ခံ
မသုံးဘဲနဲ့ ရိုးစင်းသောနည်းလမ်းလေးနဲ့ ... Password တွေကို စာသားအဖြစ်ကြည့်ရှု တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ..
တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်က Password ရိုက်နေရင်း... တစ်ယောက်ယောက်လှမ်းခေါ်လို့
ထသွားတဲ့ အခါမျိုးတို့မှာ ကိုယ်က သူ့ Password ကို Hack နိုင်ပါတယ်.... Password ကြည့်ရတာပါပဲ...
သာမန်အားဖြင့် Facebook လို Social website တစ်ခုကို ဝင်တဲ့ အခါ အောက်ပါအတိုင်း
Username နဲ့ Password ကို ရိုက်ရတာတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ....
အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ... Password ကို အလုံးလေးတွေနဲ့ မြင်ရမှာပါ.....
ကဲ ... အောက်က ပုံလို သူ့ကို Right Click ပေးပြီး ကြည့်လိုက်ပါ.......
ပြီးရင် Inspect Element(Q) ဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်ပါ....
အောက်ကပုံလို အောက်ခြေနားလေးမှာ Box ကျယ်ကျယ်လေး တက်လာပါမယ်....
အဲ့ထဲ က Box လေးကိုအနီးကပ် ပြပါမယ်...
အောက်မှာ Select လုပ်ပြီးသား... Statement တစ်ခုကို တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်....
အဲ့ဒီ့မှာ .... Type='password' ဆိုတာလေးကို နှစ်ချက် Click (Double Click) ပေးလိုက်ပါ....
အဲ့ဒီ့ ပုံမှာ Password ဆိုတာ လေးပေါ့.... အဲ့ဒါကို ဖျက်ပြီးတော့ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံလေးလို text လို့
ကဲအထက်ပါ အဆင့်တွေ အားလုံးပြီးဆုံးရင်တော့ .......
အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ.... Password တွေကို အလုံးလေးတွေ နဲ့ မမြင်ရတော့ပဲနဲ့ စာသားနဲ့ မြင်ရ
အားလုံး ဗဟုသုတ တိုးပွားနိုင်ကြပါစေ... ဒါနဲ့ တစ်ခုပြောရဦးမယ်... အောက်ဆုံး က ခရမ်းရောင်စာသား
က ကျွန်တော် ရေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်... Admin ချုပ်ကြီးရေးထားတာ.. :P
ကြုံတုန်း သူ့ကိုစတာ... :P
ကဲကဲ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ.....
ကျွန်တော် နဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောလိုပါက....
https://www.facebook.com/minmin.htet.948တို့ တွင် လာရောက် မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်...